စိတ်ဝင်စာစရာဆိုဒ်လေးများနှင် အသုံးဝင်မဲ့ဆိုဒ်လေးများ....[Website Index]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Websites Sharing » စိတ်ဝင်စာစရာဆိုဒ်လေးများနှင် အသုံးဝင်မဲ့ဆိုဒ်လေးများ....[Website Index]
1 စိတ်ဝင်စာစရာဆိုဒ်လေးများနှင် အသုံးဝင်မဲ့ဆိုဒ်လေးများ....[Website Index] on 19th September 2009, 10:20 am
ကျွန်တော်သိသလောက် တင်ပေးလိုက်တာပါ ။
2 Re: စိတ်ဝင်စာစရာဆိုဒ်လေးများနှင် အသုံးဝင်မဲ့ဆိုဒ်လေးများ....[Website Index] on 19th September 2009, 10:24 am
ဒီတစ်ခါကမိန်းခလေးတွေနဲ ့ပတ်သက်တဲ့ မိန်းခလေးတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ beauty ဆိုဒ်လေးတွေ တင်ပေးမယ်
ကဲ့အဲ့လောက်ပါပဲခင်ဗျာ .....နောက်ထပ်သိတဲ့လူတွေရှိရင်တော့ ထပ်လေ့လာလို ့ရတာပေါ့ဗျာ
Last edited by Fox on 14th August 2011, 9:24 pm; edited2times in total (Reason for editing : link များအား code ဖြင့်ဖော်ပြလိုက်သည်။)
3 Re: စိတ်ဝင်စာစရာဆိုဒ်လေးများနှင် အသုံးဝင်မဲ့ဆိုဒ်လေးများ....[Website Index] on 19th September 2009, 10:31 am
ကျနော့်အတွက်ကတော့ အလုပ်အတွက် Site လေးတွေက အဆင်ပြေသွားပြီ
ကျနော့် ချစ်ချစ် ကိုတော့ အလှအပ Site လေးတွေ ပြန်ပြောပြလိုက်ဦးမယ်
ခုလို မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးနော်။.
4 Re: စိတ်ဝင်စာစရာဆိုဒ်လေးများနှင် အသုံးဝင်မဲ့ဆိုဒ်လေးများ....[Website Index] on 19th September 2009, 12:17 pm
နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့ဝတ္တု၊မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်အစုံအလင်းပါတဲ့ ဆိုဒ်လေးပါ တင်ပေးမယ်နော်
သိသလောက်လေးပေါ့ ကောင်းပါတယ် ဖတ်လို ့လဲ ......နောက်သိတာလေးတွေကိုတော့စုဆောင်းလိုက်အုံးမယ် ဆုံမှပဲတင်
Last edited by Fox on 14th August 2011, 9:25 pm; edited2times in total (Reason for editing : link များအား code ဖြင့်ဖော်ပြလိုက်သည်။)
5 Re: စိတ်ဝင်စာစရာဆိုဒ်လေးများနှင် အသုံးဝင်မဲ့ဆိုဒ်လေးများ....[Website Index] on 19th September 2009, 12:18 pm
$ƴǩǾ wrote: ကျနော့်အတွက်ကတော့ အလုပ်အတွက် Site လေးတွေက အဆင်ပြေသွားပြီ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
ကျနော့် ချစ်ချစ် ကိုတော့ အလှအပ Site လေးတွေ ပြန်ပြောပြလိုက်ဦးမယ် [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
6 Re: စိတ်ဝင်စာစရာဆိုဒ်လေးများနှင် အသုံးဝင်မဲ့ဆိုဒ်လေးများ....[Website Index] on 19th September 2009, 12:30 pm
7 Re: စိတ်ဝင်စာစရာဆိုဒ်လေးများနှင် အသုံးဝင်မဲ့ဆိုဒ်လေးများ....[Website Index] on 21st September 2009, 4:23 pm
I need you are job site.
8 Re: စိတ်ဝင်စာစရာဆိုဒ်လေးများနှင် အသုံးဝင်မဲ့ဆိုဒ်လေးများ....[Website Index] on 22nd September 2009, 10:42 am
Intro လုပ်တဲ့နေရာမှာ Job တွေဝင်နေပါလား
9 Re: စိတ်ဝင်စာစရာဆိုဒ်လေးများနှင် အသုံးဝင်မဲ့ဆိုဒ်လေးများ....[Website Index] on 26th October 2009, 3:08 pm
ဤ site သည် ပုံများကို စိတ်ကြိုက် ယူ၍ ကြိုက်သလို ဖန်တီး ကာ သင့်စိတ်ကြိုက် format ဖြင့် save မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Photo converter site များထဲမှ အကောင်းဆုံး site ဖြစ်ပါ သည်။
္ကဤ site သည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိိ သင့်စိတ်ကြိုက် mp3 သီချင်းများကို
ရှာဖွေပေးသော Engine တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Search Box ထဲတွင် သင် နားထောင်လို
သော သီချင်းအမည်၊ အဆိုတော် အမည်၊ သီချင်း အယ်လ်ဘန် သင်မှတ်မိသော စာကားလုံး
ရုံဖြင့် နားစဉ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Google Search Engine
မှာရှာဖွေရခြင်းထက်ကို ပို၍ လွယ်ကူပါသည်။ mp3 format များသာမက wav, .au,
.ar. ram, .snd စသည့် format များလည်းပါ၀င်ပါသည်။ သီချင်းများကို
အလွယ်တကူနားစဉ် နိုင်သော site များထဲမှ အကောင်းဆုံးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
္ကဤ site သည် သင်နှစ်သက်သော ဘာသာစကား မျိုးဆုံကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ဂိမ်းမျိုးဆုံ ကို ၀င်ရောက် ကစားနိုင်သော site တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
AUTO CAD အကြောင်း တင်ထားသော site များမှာ အလွန်ရှားပါးပါသည်။ ၄င်းတို့ ထဲမှ အကောင်းဆုံးသော site ဖြစ်ပါသည်။
AUTO CAD လေ့လာသူများအတွက် အလွန်အသုံးဝင်သော site ဖြစ်ပါသည်။
ဤ site သည် သင်တို့၏ PC တွင်လည်းကောင်း ၊သင် တို့ ၏ web site များတွင်
လည်းကောင်း icon များကို စိတ်ကြိုက်တင်ထားနိုင်စေရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ဤ site
မှ လှပသော icon များကို ရယူနိုင်ပါသည်။
Google, Yahoo အစရှိသော Search engine ပေါင်း တစ်သန်းကျော် ထဲမှ
၄င်းတို့ကဲ့သို့အကောင်းဆုံးသော search engine ဖြစ်ပါသည်။
10 Re: စိတ်ဝင်စာစရာဆိုဒ်လေးများနှင် အသုံးဝင်မဲ့ဆိုဒ်လေးများ....[Website Index] on 10th August 2011, 4:41 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2011-07-28
11 Re: စိတ်ဝင်စာစရာဆိုဒ်လေးများနှင် အသုံးဝင်မဲ့ဆိုဒ်လေးများ....[Website Index]